Iimfihlakalo zeNtombikazi yaseGuadalupe ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kwinkcubeko yaseMexico, iNtombi Enyulu yaseGuadalupe lolona phawu lubonakalisayo kolu hlanga, nangona kunjalo, kukho imibuzo ethi, nokuba ithatha ixesha elingakanani, ingekatyhilwa. Iimfihlakalo zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe.
Iimfihlakalo kumfanekiso weNtombikazi yaseGuadalupe
1 Iimfihlakalo zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe Zintoni ezo?
2 Imbali yokuvela kweNtombi Enyulu yaseGuadalupe
3 Intsingiselo kunye neemfihlakalo zeNtombikazi yaseGuadalupe
3.4 Iqhiya yentloko
3.5 Imitha yelanga
4 Ezinye iimfihlakalo ezingenakuchazwa zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe
Iimfihlakalo zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe Zintoni ezo?
Zininzi izinto ezixhalabisayo malunga nento efuziselwa yiNtombi Enyulu yaseGuadalupe, ngokutsho kwamakholwa amaninzi athembekileyo, umfanekiso wayo uphethe iimfihlelo ezininzi, ke kweli nqaku siza kukutyhilela Iimfihlakalo zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe kunye nentsingiselo yento nganye egcinwa ngumfanekiso wakho.
Ngokuqinisekileyo njengomKatolika uze uzibuze, ithetha ntoni into nganye efumaneka kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe? Kwinkcubeko yaseMexico, inkolo yamaKatolika indala kakhulu, izithethe zayo kunye neenkolelo ziye zanyamezela kule minyaka idlulileyo.
Umzekelo woku yimibhiyozo ebanjwa njengesikhumbuzo seNtombi Enyulu yaseGuadalupe, baqala imibhiyozo yokuphela konyaka beyinxalenye ye-Guadalupe Marathon, ebizwa njalo ngabathembekileyo bayo.
Imbali yokuvela kweNtombi Enyulu yaseGuadalupe
Ngokwesiko, nge-12 kaDisemba, 1531, umntu wemveli wayefuna umntu oza kunceda umalume wakhe owayesempilweni, kolo phando wazifumana sele esendleleni eya kwiNtombikazi enguMariya kwinto eyaziwayo namhlanje emini njengeCuatitlán e-State of Mexico ebhengeza ukuba umalume wakhe sele ephilile.
Kodwa njengomqondiso wombulelo kuye, owomthonyama ogama linguJuan Diego kwafuneka akhwele encotsheni yenduli yaseTepeyac aqokelele iiroses azise kubishophu njengophawu lwemimangaliso yakhe kwaye amcele ukuba akhe itempile ngembeko yakhe. .
UJuan Diego wenza yonke into awayeyifunwe yiNtombi Enyulu kwaye ibali lamkelwa yiVatican ngelo xesha kuba xa wayezisa iiroses kuBhishophu uZumárraga, xa wayezishiya kwingubo yakhe awayezisonge kuyo, kwabonakala umfanekiso wokuba wonke umntu esimaziyo njengeNtombi Enyulu yaseGuadalupe
Ngokwembali, iminyaka eli-136 emva kokubonakala kokugqibela kweNtombi Enyulu, umbhiyozo wokuqala kuyo waqala nge-12 kaDisemba, olu suku lurekhodwe njengosuku lokukhumbula imbonakalo yalo, lubhengeza ukuba yiholide kaZwelonke yiCongress of the Nation.
Intsingiselo kunye neemfihlakalo zeNtombikazi yaseGuadalupe
Umfanekiselo weNtombi Enyulu yaseGuadalupe igcina ezinye iimfihlelo kumfuziselo wayo ongaziwa ngabantu abaninzi. Ungummeli we-idiosyncrasy yaseMexico ebonakaliswa kulwazi lweso sizwe. Ke ngoko, sityhila intsingiselo nganye ukongeza kwi Iimfihlakalo zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe igcinwe kumfanekiso wasentsomini.
Nangona beqhuba uphando olwahlukeneyo ngemvelaphi yalo, kusekho izinto ezininzi ezingaziwayo ukuba isayensi namhlanje khange ikwazi ukuyiqonda, enje ngemeko yolondolozo esele inayo, imibala engakhange ibenombala ngaphandle kwexesha, njani usindile kuqhushumbo olutshabalalise indawo ebiyelweyo yokuqala kodwa lashiywa linjalo, phakathi kweminye imibuzo. Emva koko, siza kukhankanya ezinye zeempawu ezibalaseleyo zomfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe.
Ukuthantamisa nobubele kubonakala ngokucacileyo emehlweni akhe, njengoko abemi bethatha ukungabi nantlonelo ukujonga ngqo phambili, umfanekiso ugoqe intloko njengophawu lwentlonipho nentlonipho. Ngokwezifundo ezithile, amanani abantu ali-12 abonakala emehlweni akhe.
Umlomo wakhe osezantsi watsalwa ngaphezulu kweqhina le-ayate, ezisa ubabalo olongezelelekileyo ebusweni beNtombi.
Izandla zifanekisela umthandazo xa zihlanganisene, zikwamele umanyano phakathi kweentlanga zehlabathi.
Isaphetha esimnyama esixhonywe kwilokhwe yakhe simele ukuba ngumama kunye nokuzalwa kwexesha elitsha ngaphakathi el mundo. Abafazi bomthonyama ababekhulelwe ngelo xesha, babenxibe ibhendi ngaphezulu kwesinqe sabo ukukhulula isibeleko sikanina.
Imitha ebhekiswe kwiNtombi Enyulu imele i-aura, yiyo Ilanga Oko kukhanya ngaphezulu kancinci kunesisu sakhe.
Imele isibhakabhaka, ineenkwenkwezi ezingama-46 ezitsaliwe ngokwemvelaphi yekroza elalisesibhakabhakeni mhla labonakala kuJuan Diego. Umbala oluhlaza ubonakalisa ukuba wayeyinkosikazi.
Ingubo yakhe ebomvu kwaye kukho iintyatyambo ezilithoba ezikhoyo, ebezimele ukuba zimele abantu abasithoba base-Aztlán. Ungayibona intyatyambo yeNahui Ollin, emele ubukho bukaThixo.
Inyanga ibonakala inolawulo oluthile lomfanekiso phezu kwayo. Kuthetha ukuba iNahuatl yaseMexico (embindini womhlaba).
Uninzi lwabantu bomthonyama badibanisa amafu nokuphakama okanye ukuba umoya uvukile, Oko kukuthi, babonisa ubuthixo ukongeza ekubhengezeni ixesha elitsha.
Ithoni yayo yoqobo yi-ocher, amehlo ajonge phantsi kunye nokuhamba kwedolo kubonisa umdaniso wemveli, le yindlela yokuthandaza.
Ngokutsho kwabo bafunde lo mfanekiso, ingelosi inokumela intaka eyenze isibhengezo kumthonyama uJuan Diego, kuba ukubonakaliswa kwezandla zakhe kubonisa umanyano lwezulu nomhlaba.
Emfanekisweni iNtombi Enyulu yaseGuadalupe inenwele ezantsi, nto leyo ebonisa ukuba yayinobuntombi, oko kukuthi, ngokwenkcubeko yama-Aztec yabonisa ubuntombi bayo.
Ezinye iimfihlakalo ezingenakuchazwa zeNtombi Enyulu yaseGuadalupe
Ngo-1791, wawela kwisambatho se-muriatic acid, emva kwenyanga emva kwesehlo, wakwazi ukuyibuyisela ingubo ngokwakhe. NgoNovemba 14, 1921, ibhombu yaqhuma yatshabalalisa yonke into ejikeleze yona, kodwa umfanekiso weNtombikazi awuzange wenzakaliswe. Kuyatshiwo ukuba umnqamlezo wesinyithi xa ugobile kukuqhushumba wagubungela kwaye wakhusela i-tovas engcwele kule ngozi.
Ungandwendwela inqaku elilandelayo ukuze wazi okungakumbi malunga noMxhasi oyiNgcwele waseMexico, apho unokufumana khona umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe oku kuthandazwa kuye xa abathembekileyo bakhe besebunzimeni.